Tsy mazava intsony izay tsy ahombiazana | NewsMada
Tsy mazava intsony izay tsy ahombiazana
Par Taratra sur 09/01/2017
Hatramin’izao, telo taona izay: banga ny toeran’ny mpanohitra hoe ara-dalàna eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Soketaina ho manakiana fotsiny izay mitsikera, fa tsy manome tanana amin’ny fampandrosoana. Izay mitady hamory vahoaka an-dalambe na an-kianja, ampangaina ho manakorontana sy manongam-panjakana: darohana izay mihetsika. Ao aza ny amoronana raharaha tsy marina hampihorohoroana ny hafa.
Vokany, tsy hita be ihany izay tena hoe manelingelina ny mpitondra tsy hanao ny asany. Lazaina fa misy ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika. Noho ny fampiasana herim-pamoretana? Na kolikoly, na kiantranoantrano… Tonga hatramin’ny hoe: tsy mbola nisy fotoana mahafeno ny fepetram-pahombiazana toy izao misy izao. Fambara mazava fa eo an-tokonan’ny fisandratana, hono, ny firenena ankehitriny.
Mahavalalanina sy mahafanina, tsy hita ihany izay hoe fihatsaram-piainan’ny vahoaka ifotony. Ny enti-manana no tsy misy? Hirahiraina tato ho ato ny fahazoana vola amina miliara dolara. Nahoana no tsy hita be ihany na tsy lazaina mazava ny raharaha amin’izany: izay tena hatao, ny fe-potoana hamitana azy, ny hanao ny asa, ny hanombohana azy, ny vokatra aminy… Ampitso ampitso lava tsy misy farany.
Nahoana àry no tsy misitraka inona amin’izay fampandrosoana ny vahoaka? Eny, na inona lazaina, na fampanantenana, na famalifaliana… Mitohy ihany ny fampandriana adrisa. Na kitsapatsapa, na hevitra mievotrevotra… Na zavatra hafa no lehibe sy mahamaika: tamberin’andraikitra amin’ny vahiny miaro sy iraisana tsikombakomba noho ny tombontsoa manokana, fa tsy amin’ny vahoaka malagasy?
Mampanontany tena izany rehetra izany, mahafanina sy mahavalalanina. Sao fototra sy fositra ny tsy fahaiza-manao, ny tsy fahavononana, ny tsy fandinihan-tena… Tsy fantatra intsony. Toa arakaraka ny tsy fisian’ny mpanelingelina na sakana, mpanohitra na ny tsy fisian’ny vola, ohatra, no mahakizo fara. Tsy mazava intsony izay tena antom-pisiana. Mila fandinihana sy fanapahan-kevitry ny vahoaka amin’izay hatao?